Gbasara anyị - Hebei Shoufan Metal Products Co., Ltd.
Hebei Shoufan Metal Products Co., Ltd. emi odude ke Dingzhou City, Hebei Province. E nwere adaba njem na uru ọnọdụ nke dị nso na okporo ụzọ ụgbọ okporo ígwè na Jing Guang na Jing Jiu, okporo ụzọ mba mba No77, Jingshen na Shihuang expressway, Naanị kilomita 40 site na Shijiazhuang International Airport na 330 kilomita site na Xingang Port, Baojin expressway (Baoding ka Tianjin) na-eduga n'ọdụ ụgbọ mmiri ozugbo.
Dị ka otu n'ime ndị kasị ibu kpọmkwem waya na waya ntupu manufactures na china, anyị nwere ike inye gị elu-qulity ngwaahịa na asọmpi price, isi ngwaahịa nke anyị rụpụta na-agụnye ígwè waya na-kpaliri ígwè waya, nwa annealed waya, barbed waya, ịkwanyere ntekwasa waya, spool waya, aguba waya na na, na waya ntupu agụnye hexagonal waya netting, square waya ntupu, crimped waya ntupu, welded waya ntupu, yinye njikọ ngere, igwe anaghị agba nchara waya ntupu, gbasaa waya ntupu, window ihuenyo, ogige nsu na na na.
Mkpụrụ kwa ụbọchị nke waya wires, calorifying wires, galvanizing wires na meshes bụ karị 95mt, 40mt, 65mt na 35,000 square mita, kwa afọ urnover bụ karịa usd20 nde.
A na-eji ngwaahịa ndị a eme ihe n'ọtụtụ ebe na mmanụ ala, kemịkalụ, ihe owuwu, textiles, ahịa ọgwụ, ikuku na ikuku. A na-ere ngwaahịa ndị a, nke ndị ahịa - ụlọ na mba ọzọ kwadoro, na ndịda ọwụwa anyanwụ Asia, Europe, USA. Japan, Mid-East, wdg wee nweta aha ọma.
Principlekpụrụ anyị dị mma, na ntinye oge, ọnụahịa ezi uche dị na ya. Anyị ji obi anyị nile na-eme ka mmekọrịta enyi na enyi si gburugburu ụwa. na imepụta ọdịnihu dị mma na ụlọ ọrụ gị.
AKKỌ ogologo oge
Tọrọ ntọala na 2008, afọ 9 nwere ahụmịhe na ụlọ ọrụ ngwaahịa ngwaahịa.
Chepụta ma rụpụta ngwaahịa dị elu na 30 R&D; ndị injinia.
Ngwa ngwa nnyefe, Anyị nwere ike ibufee ngwongwo gị n'ime 30days.
Ndị ọrụ ọkachamara ọkachamara na-enye nzaghachi ngwa ngwa na ọrụ dị mma.
2014 Hebei shoufan metal ngwaahịa co., LTD melite.
2014Debe ọfịs na isi obodo mpaghara shijiazhuang, na-abanye na Dubai. Na SouthEast Asia Market, Meghee uzo ahia ahia mba ofesi.
2015 Ihe ngosi ahia nke mba ofesi-Iso banye na ngosi ahia nke dubai, Inyocha ahia mba ofesi.
2016 Chee echiche n'ụwa nile-Ngwaahịa ndị metụtara mba na mpaghara 80.
2017 Mmụba — Baawanye nke ọ̀tụ̀tụ̀ nke ọfịs, Mepee nnukwu ụlọ nkwakọba ihe.
2019 Anyị nọ n'ụzọ.